Xayeysiisyada Microsoft ee Is dhexgalka IQ ee tafaariiqlayaasha, sumadaha hadda waxay ku jiraan beta | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/Is dhexgalka Xayeysiiska Microsoft ee PromoteIQ ee tafaariiqlayaasha, sumadaha hadda waxay ku jiraan beta
Is dhexgalka Xayeysiiska Microsoft ee PromoteIQ ee tafaariiqlayaasha, sumadaha hadda waxay ku jiraan beta
Tafaariiqda ayaa noqotay diiradda muhiimka ah ee dadaalka Microsoft ee lagu taageerayo isbeddelka dhijitaalka ah ee shirkadaha. Waxay xoojisay xayaysiinta iyo xayaysiiska qaybteeda tignoolajiyada ee tafaariiqda iyada oo lahelay madal suuqgeyneed iibiye PromoteIQ bishii Ogosto. Hadda, is dhexgalka la sugayay ee Xayeysiiska Microsoft wuxuu ku jiraa beta, Microsoft ayaa ku dhawaaqday Khamiista. Shirkaddu waxay sidoo kale bilaabaysaa inay samayso wax soo saarkeeda cusub ee goob raadinta Microsoft Bing ee Ganacsiga oo ay heli karaan tafaariiqlayaasha.
Microsoft PromoteIQ. Goobta suuq-geynta ganacsiga, oo hadda loogu magacdaray Microsoft PromoteIQ, ayaa u sahlaysa tafaariiqleyaasha inay dhisaan oo ay xakameeyaan barnaamijyadooda suuqgeynta dijitaalka ah ee summadaha ku iibinaya goobahooda.
Tafaariiqleyaashu waxay ku habeyn karaan meelo badan oo xayeysiis iyo alaabooyin ah oo goobahooda ah iyaga oo u marinaya dashboardka Microsoft PromoteIQ. Madalku wuxuu u oggolaanayaa tafaariiqleyaasha inay habeeyaan barnaamijyada, beegsiga iyo agabka la-hawlgalayaasha astaanta gaarka ah. Noocyada ku shaqeeya barnaamijyada tafaariiqle waxay geli karaan is-dhexgal-calaamadeedka cad si ay u arkaan dhaqanka dukaamada ee mareegaha tafaariiqda oo ay u isticmaalaan ololahooda si ay u saameeyaan dabeecadaha oo ay u taageeraan yoolalka alaabadooda tafaariiqdaas.
Depot-ka Guriga ayaa sheegay in ka-qaybgalka macaamiisha ay kordheen 35% iyo badeecadaha la dalacsiiyay ay kordheen laba-lambar-lambar sanadka-sannadka ka badan tan iyo markii lagu bilaabay PromoteIQ horraantii 2019. Xafiiska Depot, Kohl's iyo Kroger ayaa ka mid ah silsiladaha tafaariiqda kale ee isticmaalaya goobta.
Is dhexgalka Xayeysiiska Microsoft. Is dhexgalka Xayeysiiska Microsoft waa kii ugu horreeyay ee la socda xirmada Microsoft, PromoteIQ's maamulihii hore ee maamulaha hadda ah hogaamiyaha ganacsiga Alex Sherman ayaa ku sheegay wareysi taleefan Khamiistii. Waxay furaysaa ilo cusub oo dalabka xayeysiinta ee tafaariiqda. Is dhexgalka hadda wuxuu ku jiraa beta.
Tafaariiqlayaasha ka qaybqaata waxay dooran karaan inay furaan qayb ka mid ah alaabadooda xayaysiisyada si ay u doortaan summadaha iyagoo isticmaalaya madal Xayeysiisyada Microsoft. Noocyada la oggol yahay ayaa markaa dejin kara ololeyaal wax-soo-iibsi oo kala duwan si ay uga shaqeeyaan goobta tafaariiqda iyagoo sii maraya akoonnada Xayeysiiska ee Microsoft. Sherman ayaa sheegtay in tani ay tahay bilow oo sifooyin badan iyo shaqeyn ay la imaan doonto isdhexgalka.
Tafaariiqleyaashu waxay sii ahaanayaan kantaroolka barnaamijyada iibiyeyaasha - waxay doortaan noocyada ka qaybqaadan kara waxayna xakameyn karaan heerka agabka iyo meelaynta ay heli karaan. "Tafaariiqleyaashu ma rabaan inay noqdaan sahay aan weji lahayn oo qof kale u adeegsanayo inuu ku dhiso ganacsi xayaysiis," Sherman ayaa tiri. "Marka ay jiraan daldaloolo meesha tafaariiqle uusan xiriir toos ah la lahayn astaanta, waxay geli karaan Xayeysiiska Microsoft si ay kuwan furaha u noqdaan."
Sababta aan u danayno. "Dhawrkii sano ee la soo dhaafay, suuq-geyntu iibiyuhu waxa uu u wareegay wax ay tahay in la helo," ayay tiri Sherman. Iyo qaar badan oo tafaariiqle ah sida Walmart, tusaale ahaan, waxay u rareen meheraddan guriga dhexdiisa. Microsoft hadda waxay siin kartaa tafaariiqleyaasha xal la beddeli karo, oo heer-shirkadeed ah oo ay maamuli karaan iyaga oo aan dhisin oo ay taageeraan tignoolajiyada lahaanshaha - waxayna si asal ahaan ula midoobi doonaan xalalka kale ee Microsoft.
Tani waxay sidoo kale ku habboon tahay meelaynta kala duwan ee Microsoft ee Google iyo Amazon sida lammaanaha tafaariiqda halkii ay ka ahaan lahayd tartame.
Microsoft Bing ee Ganacsiga. Marka raadinta goobta ee mareegaha tafaariiqda aysan siin macaamiisha waxa ay raadinayaan, waxay kor u qaadi kartaa heerarka dayrinta waxayna dhaawici kartaa beddelka. Microsoft Bing for Commerce waxay isticmaashaa sirdoonka Bing iyo Microsoft AI oo ay ku wargaliyaan "aragtiyo malaayiin dukaameeysatayaal ah" si loo xoojiyo talooyinka badeecada ee goobaha tafaariiqda.
Waxaa lagu heli karaa horudhac dadweyne oo tafaariiqleyaasha waaweyn si gooni-gooni ah ayaa loo heli doonaa dhawaan iyada oo qayb ka ah Dynamics 365 Commerce.
Ha moogaanin labada maalmood Suuqgeynta Ganacsiga Dijital ah track at SMX West ee San Jose, CA, Febraayo 19 iyo 20.
Sida Looga Iibiyo Cuntooyinka Amazon
10 Tifaftirayaasha HTML ee bilaashka ah ee Suuqa loogu talagalay Horumariyeyaasha WordPress iyo Isticmaalayaasha Sare